HomeSuuqa kala iibsigaLiverpool oo 30 milyan ginni ku soo iibsaneysa weeraryahanka Lille ee Jonathan David
December 3, 2021 Suuqa kala iibsiga, Horyaalka Ingiriiska, Wararka Ciyaaraha 0
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa in loo sheegay inay bixiso 29.7 milyan ginni si ay u hesho adeega weeraryahanka Lille Jonathan David .
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Canada ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku qaadanaya kooxda heysata horyaalka Ligue 1 xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay 12 gool 21 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
David ayaa qandaraas kula jira kooxda Lille ilaa xagaaga 2025, laakiin qaab ciyaareedkiisa xilli ciyaareedkii 2021-22 ayaa loo malaynayaa inay xiiso u qabaan Liverpool.
Sida laga soo xigtay majaladda Faransiiska ah ee L’Equipe , Lille ayaa diyaar u ah inay David u ogolaato inuu mustaqbalkiisa ku hormariyo meel kale haddii koox danaynaysa ay diyaar u tahay inay ku iibiso ku dhawaad ​​30 milyan ginni.
Warbixinta ayaa intaa ku dartay in David uu doonayo inuu isku tijaabiyo horyaal kale xilli ciyaareedkan Lille, waxaana uu bartilmaameed u ahaa Liverpool.
21-sano jirkaan ayaa wadar ahaan u dhaliyay 25 gool 70 kulan oo uu u saftay Les Dogues, 10 ka mid ah waxa uu dhaliyay xilli ciyaareedkii 2021-22 Ligue 1.